ရှာမှရှားတဲ့ သူလိုလူ ဆိုကျကားဆရာ ကိုသူရ
ရှာမှရှားတဲ့ သူလိုလူ ဆိုကျကားဆရာ ကိုသူရ ငမိုးရိပျ 10 လမျး သင်ျကနျးကြှနျး မနကျ 10:30 ဝနျးကငျြ ပုံပါကလေးငယျက ကိုယျဝနျသညျမိခငျနဲ့အတူ ဈေးဝယျထှကျတုနျး အနီးနားမှာ ဗုံးပေါကျကှဲ ပွေးကွ လှားကွ ရှုတျရှကျခတျနရေငျး မိခငျတခွား ကလေးတခွားတှဖွေဈ တှနျးကွတိုးကွ တိုကျကွရငျး မိခငျက တငိုငိုတရီရီဖွဈ သားဇောနဲ့ မလေဲ့ ဘေးလူမြားက ဆေးခနျးပို့ ကလေးလဲ လူကွားထဲ ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ အျောဟဈငိုယို အနီးအနားရှိသူတိုငျး သူ့မကွညျ့နိုငျ ကိုယျ့မကွညျ့နိုငျ အနအေထား ကိုသူရ ရောကျလာ ကလေးကိုခြော့ ကလေးနံမညျ အဖေ အမနေံမညျမေး လိပျစာမေး နံမညျတှအေကုနျလုံးမှနျပမေဲ့ လိပျစာကမရရော တနသော ကုနျသှားတယျ ရှာမတှေ့ သူ့အိမျချေါသှား …
ကာရာဘောင်ဖလား စတုတ္ထအဆင့်မှာ မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ အာဆင်နယ်တို့ ဘယ်အသင်းတွေနဲ့ တွေ့မလဲ
ကာရာဘောင်ဖလား စတုတ္ထအဆင့်မှာ မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ အာဆင်နယ်တို့ ဘယ်အသင်းတွေနဲ့ တွေ့မလဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားလိုပဲ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေအတွက် ပြည်တွင်းဖလားလေးတွေက အရေးပါတဲ့ ဆုဖလားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Treble လိုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရှည်ကြီးမှာ ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းဖလားလေးတွေက အသင်းပရိသတ်တွေကို ချွေးသိပ်လို့ရတဲ့အပြင် ဖလားလက်မဲ့ရာသီကို မဖြတ်သန်းရဖို့အတွက် အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခု စတုတ္ထအဆင့်မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖျက်မြင်း ဆောက်သမ်တန်အသင်း၊ အာဆင်နယ်အသင်းက လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်း၊ လီဗာပူးလ်အသင်းက ပရက်စတန်နော့အင့်အသင်းတိုနဲ့ အသီးသီးတွေ့ဆုံနေပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်တွေကို လာမဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့နဲ့ ၂၇ ရက်တို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွာတာဖိုင်နယ်ကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ ကစားရမှာပါ။ ကာရာဘောင်ဖလားလေးကြိမ်ရထားတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းက တတိယအဆင့်မှာ မန်ယူကို ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ …
အကောင်းဆုံးဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားစရာမလိုဘူးလို့ လီဝန်ဒေါစကီးဆို
အကောင်းဆုံးဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားစရာမလိုဘူးလို့ လီဝန်ဒေါစကီးဆို ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ ရော်ဘတ် လီဝန်ဒေါစကီးကို ခေါ်ယူဖို့ ပရီးမီယားလိဂ်ထိပ်သီးအသင်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘေယန်မြူးနစ်မှာပဲ အချိန်အတော်ကြာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ရာသီအတွက် ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုကို လက်ခံရယူခဲ့တဲ့ လီဝန်ဒေါစကီးက သူ့ကိုယ်သူ ထပ်ပြီးသက်သေပြဖို့ တခြားလိဂ်တွေမှာ ကစားဖို့ မလိုဘူးလို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။ သူဟာ ဘွန်ဒစ်လီဂါ ၂၉ ပွဲမှာ စံချိန်တင် ၄၁ ဂိုးအထိ သွင်းယူထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် ပိုလန်သား လီဝန်ဒေါစကီးသည် ဘေယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လက ထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ သူက ဘေယန်ကထွက်ခွာပြီး …
ပေါ့ဘာကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ စီရိုနယ်ဒိုက စွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ မန်ယူဂန္တဝင် တက်ဒီရှာရင်းဂမ်မျှော်လင့်
ပေါ့ဘာကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ စီရိုနယ်ဒိုက စွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ မန်ယူဂန္တဝင် တက်ဒီရှာရင်းဂမ်မျှော်လင့် မန်ယူအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းနောက်ဆုံးနှစ်ထဲရောက်နေတဲ့ ပေါ့ဘာက လာမဲ့နှစ်မှာ အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို မန်ယူမြေကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခြင်းက ပေါ့ဘာကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ စွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ မန်ယူအသင်းဂန္တဝင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း တက်ဒီ ရှာရင်းဂမ် က ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရာသီ မန်ယူအသင်းအတွက် ပေါ့ဘာက အထူးခြေစွမ်းပြသနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲလေးပွဲမှာ ခုနှစ်ဂိုးအထိ ဖန်တီးထားပေးပြီး မန်ယူအသင်းကို ဇယားထိပ်ပိုင်းရောက်အောင် ကူညီပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ မန်ယူအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့ ဆယ်လခန့်သာ ကျန်တော့ပေမဲ့ အခုထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ သဘောတူညီမှု မရသေးပါဘူး။ အကယ်၍ စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးနိုင်ပါက ဇန်နဝါရီလကစ တ​ခြားအသင်းတွေရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ …
စီရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ယူရာမှာ သူပါဝင်ခဲ့ပုံကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်
စီရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ယူရာမှာ သူပါဝင်ခဲ့ပုံကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က စီရိုနယ်ဒိုကို ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ သူပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ စီရိုနယ်ဒို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှ ထွက်ခွာမည်ဆိုပြီးနောက် ဆာအဲလက်စ်က ဆူညံတဲ့ အိမ်နီးချင်းလို့ နောက်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးအသင်းကို ရောက်ရှိဖို့ လက်တစ်လုံးအလိုမျှ နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ စီရိုနယ်ဒိုအပေါ် သားတစ်ယောက်လို သံယောဇဉ် ကြီးရှာတဲ့ ဆာအဲလက်စ်က မန်စီးတီးအသင်းဆီ ရိုနယ်ဒိုမရောက်သွားရေး၊ အိုးထရက်ဖိုဒ့်မြေကိုသာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ ဆာအဲလက်စ်ရဲ့ ဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့ရပြီး စီရိုနယ်ဒိုကို မန်ယူဂျာစီနဲ့ အတူ ဂိုးတွေသွင်းနေတာကို မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူရဲ့ ဂန္တဝင်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်က စီရိုနယ်ဒိုရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ …
စအိုထဲကို ငါးရှဉျ့ထညျ့ပွီး ဆေးကုတာ ကံကောငျးလို့ မသေ
စအိုထဲကို ငါးရှဉျ့ထညျ့ပွီး ဆေးကုတာ ကံကောငျးလို့ မသေ မောငျယဿ ဝမျးခြုပျနရေငျ စအိုထဲကို ငါးရှဉျ့ ထညျ့လိုကျပါ ငါးရှဉျ့ က အူလမျးကွောငျး လှုပျရှားမှုကို အထောကျ အကူပေးလို့ ဝမျးခြုပျတာ သကျသာပွီး ဝမျးကို မှနျစတေယျ ဆိုတဲ့ ကုထုံးအမှားကွီးကို တရုတျနိုငျငံမှာ လူတျောတျော မြားမြားက ဟိုလူပွော ဒီလူပွော နဲ့ လကျခံထားကွပါတယျ။ ဒီလ ၂၀ ရကျနကေ့ တရုတျပွညျအရှပေို့ငျး ကငျြစု ပွညျနယျက အမြိုးသား တဈယောကျက ဝမျးခြုပျတဲ့ ဝဒေနာကို နှဈရှညျလမြား ခံစားနရေပါတယျ။ သကျသာလို သကျသာငွား ဆေးတှကေိုလညျး တဈမြိုးပွီး တဈမြိုး စမျးသပျခဲ့ပါတယျ။ ဆေးတှကေ မထိရောကျလို့ နောကျဆုံး …
ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အိမျတဈအိမျအတှကျ အောကျဆီဂငျြအိုးကိုယျတိုငျထမျးပွီး လိုအပျတာတှေ သှားပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတျော
ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အိမျတဈအိမျအတှကျ အောကျဆီဂငျြအိုးကိုယျတိုငျထမျးပွီး လိုအပျတာတှေ သှားပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတျော တဈမိသားစုလုံး ကိုဗဈဖွဈနလေို့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အိမျတဈအိမျအတှကျ အောကျဆီဂငျြအိုးနဲ့ စားစရာတှေ သှားပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတျောတဈပါး အခကျအခဲဖွဈနကွေခြိနျ ကိုဗဈတတိယလှိုငျးပွနျဖွဈလာတာကွောငျ့ ပွညျသူအမြားအပွားဟာ ဒုက်ခတှေ၊ပွဿနာတှမြေားစှာကို ပိုမိုရငျဆိုငျလာခဲ့ရပါတယျ။ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုတှကွေောငျ့ အောကျဆီဂငျြမရရှိဘဲ နစေ့ဥျnလူသဆေုံးမှုတှေ ရှိနပွေီး ပွညျသူတှဟော နစေ့ဥျနဲ့အမြှ စိတျမကောငျးစရာတှကေို ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ အခကျအခဲတှေ မြိုးစုံရှိကွပမေယျ့လညျး အားတငျးထားကွပွီး ရုနျးကနျရှငျသနျနကွေတဲ့ ပွညျသူတှကေတော့ ဒုက်ခရောကျနသေူတှကေို ကူညီဖေးမပွီး တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျပေးနကွေပါတယျ။ သံယာတျောတှကေလညျး အောကျဆီဂငျြစကျတှေ ဝယျယူဖို့အတှကျ ငှကွေေး လှူဒါနျးကွတာမြိုး၊ ပရဟိတအလုပျတှကေို ကိုယျတိုငျဝငျလုပျပွီး ပွညျသူတှကေို ကူညီကွတာမြိုးတှေ လုပျဆောငျနကွေပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ဆရာတျောတဈပါးဟာ တဈမိသားစုလုံး …
ဂမျးနမျးစတိုငျ သီခငျြးနဲ့ အားကစား မလုပျရဆိုပွီး ပိတျပငျခံရ
ဂမျးနမျးစတိုငျ သီခငျြးနဲ့ အားကစား မလုပျရဆိုပွီး ပိတျပငျခံရ မောငျယဿ ( ဇူလိုငျ ၁၈) မွူးဇဈရဲ့ ဘား ၁ဘား မှာ ဘိ ၄ဘိ ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ ကွားနရေတဲ့ ပုံမှနျ သီခငျြး တျောတျောမြားမြား က ၄ x ၄ တိုငျမငျ လို့ ချေါတဲ့ ၁ ဘား ၄ ဘိ သီခငျြးတှပေါ။ ၁ ဘားကို ၄ဘိ ထကျပိုလာရငျ သီခငျြး မွနျမွနျ လာပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး အီလကျထရိုမွူးဇဈတှကေ အလှနျမွနျတဲ့ ဘိတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျး တညျဆာကျ ထားတာပါ။ တောငျကိုရီးယားမှာ ကိုဗဈကူးစကျရောဂါ အခွအေနေ …
“PPE ဝတျစုံနဲ့ သူ”
“PPE ဝတျစုံနဲ့ သူ” ဒီလို PPE ဝတျစုံနဲ့ ဆိုတော့ သူ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး… သူတာဝနျပွီးဆုံးသှားလို့ အပွငျထှကျလာတယျ… ပထမဆုံး မကျြနှာအကာကှယျတှကေို ဖယျခှါလိုကျတယျ… ခေါငျးတုံးဆံပငျနဲ့ အျော… သူပရဟိတ လုပျနခြေိနျ ပွညျသူ့အတှကျ ကူညီပေးနခြေိနျ အလှတျလပျဆုံးဖွဈအောငျ သူ့ဆံပငျကို တိုတိုညှပျထားတာပဲပေါ့….. နောကျတဈဆငျ့ သူ PPE ဝတျစုံကို ခန်ဓာကိုယျမှ ဖယျခှါဖို့ စတငျလိုကျတယျ… ဟာ……. အမှတျတမယျ့ နှုတျက ထှကျပျေါလာတဲ အာမဒေိတျအသံနဲ့အတူ မကျြဝနျးအစုံမှာ မွငျတှလေို့ကျတာက ဘုရားသားတျော ရဟနျးတပါး…. သံဃာဆိုသညျမှာ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို့၏ ခမျြးသာခွငျးကိုသာ လိုလားကွကုနျ၏။ မွတျသော ကုသိုလျ အမွတျဆုံးစိတျထား အမွငျ့မွတျဆုံး စတေနာတှပေါ… …